Indlwana eqeshiweyo enemithombo yendalo eshushu kumazantsi eNtaba iZao --Atelier Forest Aone
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJun
Ukuhlala ixesha elide kwindalo. Ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-Wi-Fi kwaye ikulungele ukusetyenzwa. Kukho isaphulelo sexesha elide!
I-Atelier Forest Aone yi-5-minute drive ukuya e-Aone Onsen kunye ne-40-minute drive ukuya e-Zao Okama. Yindlu yabucala enemithombo yendalo eshushu kwindalo emazantsi eNtaba iZao. Sisiseko esigqibeleleyo sokujonga indawo eZao, kodwa kuthekani malunga nokuhlala ixesha elide kwindawo ezolileyo enentabalala yendalo? Ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-Wi-Fi kwaye inendawo yokusebenza ekude. Ilungele umsebenzi apho unokusebenza khona ngelixa uyonwabele iholide yakho. Kukho isaphulelo sokuhlala ixesha elide.
Ngena kukungena WEBHU. Kule mihla, ndinexhala lokunxibelelana nabanye abantu, kodwa e-Atelier Forest Aone, ndinokungena egumbini ngaphandle kokunxibelelana nabani na. Ungayonwabela indawo yakho kunye nexesha ngokuzithemba de uphume.
Unikezelo lwamanzi lwendlu yangasese lusebenzisa intsikelelo ye-Zao, amanzi aphantsi komhlaba ekhephu elinyibilikisiweyo.Ibhafu isebenzisa ilitye le-Towada, elibengezela kakuhle eluhlaza naluhlaza okwesibhakabhaka xa kufakwe amanzi ashushu.Ungonwabela umthombo oshushu wendalo otsalwa kumthombo ngelixa uhlala kwi cottage. ..
◎ Isicwangciso sendawo yokuhlala
Sisicwangciso sokuhlala ngaphandle kokutya kwisakhiwo sonke.
Ixabiso elifanayo ukuya kuthi ga kwi-3 yabantu. Intlawulo eyongezelelweyo iya kuhlawulwa kumntu ngamnye owongezelelweyo ukusuka kwi-4 yabantu. Umthamo omkhulu ngabantu abasi-7.
* Ukutya akukho.
Zive ukhululekile ukusebenzisa ikhitshi kwi-cottage kwaye ujabulele ukuziphakela. Ngaphakathi kwemizuzu eli-15 yokuqhuba ukusuka kwi-cottage, kukho iindawo zokutyela ezahlukeneyo ezifana ne-pizza, i-soba, i-hagu cutlet, i-pasta kunye ne-ramen, ngoko awuyi kuba nangxaki ngesidlo sasemini ngexesha lokuhlala kwakho. Nceda uqaphele ukuba indawo yokutyela ivalwa kwangethuba ebusuku.
Imizuzu eyi-15 ukuya kwivenkile enkulu. Ukongeza kwiivenkile ezinkulu, kukho iivenkile apho ungathenga khona imifuno yasekuhlaleni kunye noshizi, ukuze ujabulele iintsikelelo zeZao. Kuthatha i-10 ukuya kwi-15 imizuzu ngemoto ukuya kwivenkile elula.
◎ Malunga negumbi
I-Atelier Forest Aone inemigangatho emibini. Isicwangciso somgangatho yi-3LDK.
Umgangatho wokuqala: Indawo yokutyela, i-atelier, ikhitshi, ibhafu, indlu yangasese. Kukho umgangatho weplanga ojikeleze isakhiwo.
Igumbi lokuhlala linetafile yokutyela kunye nezihlalo zabantu aba-7 ukuba banandiphe isidlo sokuphumla, kwaye ikhitshi ixhotyiswe ngezixhobo zokupheka ezisisiseko kunye ne-tableware yabantu abayi-7.
Umgangatho we-2: amagumbi okulala ama-3, indlu yangasese
Igumbi lokulala 1: 1 ibhedi ephindwe kabini, ibhedi enye e-1
Igumbi lokulala 2: iifutons ezi-2
Igumbi lokulala 3: 3 futons
● Iindawo zabakhenkethi ezikufuphi
--Zaosan Okama (Goshikinuma): 50-60 imizuzu ngemoto ngeZao Echo Line
--Aone Nature Forest Park: 10 imizuzu ngemoto
--Sangai Taki / Fudo Ingxangxasi: imizuzu engama-20 ngemoto
--Miyagi Zao Fox Village: imizuzu engama-35 ngemoto
--Miyagi Zao Eboshi Resort (i-ski resort): imizuzu engama-35 ngemoto
--Miyagi Zao Ski Resort Sumikawa Snow Park: imizuzu engama-30 ngemoto
--Zao Quasi-National Park
Umbuki zindwendwe ngu- Jun
Inombolo yomthetho: M040019254